Jiraattoonni Oromo Magaala Finfinne - Caboowanci.com-Oromia
General Idea News Uncategorized
Jiraattoonni Oromo Magaala Finfinne
October 24, 2016 Nadhani	0 Comments #OromoRevolution, OLF, OMN
Yeroo ammaa jiraattoonni Oromo magaala Finfinne rakkoo cimaa keessa akka jiran beekamee jira. Mootummaan wayyaanee mana mana irra deemee namoota ykn jiraattota mana kireesaniifii mana kiraa fudhatanii jiraachaa jiran hundaa fi galmeefachaafi keessaayyuu kan mana keerreefatee fi mana kirreesaa jiru yoo Oromoo ta´ee addaan bahaamee rakkoon irra gahaa jira.
Labisii atatamaa ykn labisii muddamaa wayyaaneen baafteen walqabatee keessayyuu Oromoon mana kirreefatee magaala Finfinnee keessa jiru irrati rakkoon cimaatu muudachaa jira. Labisii kana dura enyuuyyuu waraqaa enyumaa malee mana isaaf ta´uu bakka fedheetti kiraa fudhatee kan jiraachaa ture yoo ta´ee illee amma garuu sababii labisii jedhuun illimaan oromoo amma tokko Finfinnee keessa jiran dhiibanii magaala Finfinne akka hin jiraannee gochaa jiru. Sirriidhumaayyuu bakka tokko tokkotti namoonni enyuumaan isaanii kan naannoo Oromia ibisuu yoo qabaatan kun fudhatama hin qabu jechuudhaan mirga biyya isaanii keessa jiraachuuyyuu doowwaa jiru.
Namoonni tokko tokko moo sababa addaa addaatin waraqaa enyuummaa isanii qabaachuu waan hin danideenyeef bakka jiraatan irraa qabammanii bakka isaan geeffaman hin beekamuu.
Mootumaan Ethiopian ykn mootummaan wayyanee kun erga Labsii atatamaa ykn labsii muddamaa raggaasee namoota gara 3000 ol ta´uu qabee mana hidhaa addaa addaati ciinceesaa jira. Namoota kana bishaaniifii nyaachii illee akka kennamaafii hin jirre beekamee jira. Akka websiten armaan gadii http://www.theworldweekly.com/reader/view/magazine/2016-10-20/thousands-are-arrested-as-ethiopias-state-of-emergency-bites/9257 kun illee ibisuuti amma torbaan darbee keessati namoota 1600 akka qabaman keessaayyuu naannoo Sabataa keessaa namoota 1,000 ol akka qabamani miidiyyan biyyaasiifi midiyyaan garaa garaa ibisee jira.
Kanumaan walqabatee murtii tokko malee ummanni Oromoo reebamaa hidhamaa fi tumamaa turre ammas itti jira. Mootumman nama nyaatan kun kan akka Facebook, WhatApps, Viber, kkf cufee jira. Dabalataanis Midiyaa walabaa kan ta´ee VOA, DW (German Radio) OMN, fi ESAT akka cufee beekamaadha. Ammas namoonni facebook isaa ykn ishii irrati wa´ee biyyaa ykn waa´ee maalituu yoo post godhee wagaa 5 akka hiisisuu fi sodaa addaa addaatin ummata sodaachisaa jira.
Kanaanis otuu hin dhaabatiin ummata nagaa deemaa jiru loltoota itti waamee haala nama sukkanneesun sakkata´aa jira. Amumma yeroo isaanitti bahanii dhimmaa isaanii raawwachuu hin dandeenyee. Bakka bahaniif otuu hin qaqabiinni ummanii karaa gubbaatiifii geejjiba keessati sakkata´amaa jiru waan ta´eef rakkoo jiru irrati rakkoo uumaa akka jiru beekamee jira. Kana caala uummanni halkan walakkaa mana isaa loltuu wayyaaneetin cabisamee waan sakkata´amaa jiruufi Ummanii kana caala obisa akka fixateefii guyyaa tokko akka mootummaa kana gubbaa irrati akka boombii dhohee akka lolaa haxaa´ee deemu jiraattonni dubbatuu.
← Oromian Ibidda Ruuqaa Keesaa Dhaa
Taariifinni Bilbilaa Biyya.. →